Burma Partnership » Opening the Box: Women’s Experiences of War, Peace, and Impunity in Myanmar
By Asia Justice And Rights, Kachin Women's Association Thailand, Karen Women Empowerment Group and Women Organizations Network of Myanmar • September 23, 2015
On September 23, 2015, Asia Justice And Rights (AJAR) is launching its report “Opening the Box: Women’s Experiences of War, Peace, and Impunity in Myanmar”, in collaboration with Kachin Women’s Association Thailand (KWAT), Karen Women Empowerment Group (KWEG), and Women’s Organizations Network of Myanmar (WON).
The report contains the stories of 29 women survivors from Myanmar – former political prisoners from Yangon, and internally displaced ethnic women from Karen and Kachin State. It is based on AJAR’s research withatotal of 140 women victims in Indonesia, Timor-Leste, and Myanmar using participatory tools to deepen our understanding on women’s experiences of impunity. The report also presents the key findings of our research, introduces AJAR’s methodology on participatory research with victims, and providesalist of recommendations for addressing truth, justice, and reparations for the women survivors of Myanmar.
The research is relevant, as violence against women continues to impact the lives of women in Myanmar in many different forms. One of the main findings of this research is that violence against women is empowered and maintained byaculture of impunity. Each of the 29 women from Myanmar who took part in this participatory research hasacompelling story, but woven together they provideastark picture about how the government, the army, non-state armed groups, the UN, and NGOs fail to pave the way for their survival. From their stories, we see how they largely had to help themselves, using their strength and tenacity and fighting for survival in grim situations.
Galuh Wandita, the Director of AJAR, said: “Women victims struggle with the socio-economic impact of violence and are not able to access basic services. This affects their ability to access justice.”
Based on our in-depth discussions with these 29 women survivors of violence related
to the Kachin and Karen conflicts and women former political prisoners, we urge the Myanmar government, policy makers, ethnic leaders, and civil society to fulfill the following recommendations:
Immediately put an end to violence against women during conflict and political repression, in particular sexual violence against women;
Change the 2008 Constitution in order to place the military under civilian control;
Ensure that Myanmar ratifies relevant international treaties and incorporates them into its domestic legislation, meets its obligations to protect women under CEDAW, UNSCR 1325, and 1820, and the Declaration of Commitment to End Sexual Violence in Conflict, and adopts the Anti-Violence Against Women Law;
Ensure women’s meaningful participation in the peace process and political dialogue, and include accountability for past human rights violations in discussions;
Establish effective judicial and non-judicial transitional justice mechanisms to investigate human rights abuses, particularly those related to sexual violence against women, and establish programs to enable women victims’ safe access to justice;
Create the conditions for the safe and dignified voluntary return of all conflict-affected displaced women and refugees to their communities, in consultation with them;
Establish rehabilitation programs for women survivors, in particular multi-sectoral services that include healthcare, trauma support, reproductive healthcare, and assistance for aging populations, as well as access to capital through appropriate schemes for job creation, skills training, and microfinance;
Support women survivors’ networks and linkages between them. Include them in consultations and meetings on peace, development, human rights, access to justice, and other relevant forums.Media Contact:
Galuh Wandita, AJAR: gwandita@asia-ajar.org , +95 (0) 99 60 88 7443Khin Lay, WON: zawkhinlay.71@gmail.com, +95 (0) 925-6080-897KWAT: kwat.secretariat@gmail.comKWEG: kweg.hr@gmail.com
အစီရင်ခံစာမြန်မာဘာသာကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
“မြန်မာပြည်ရှိ စစ်ပွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်တို့ကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့သော အမျိုးသမီးများ၏အတွေ့အကြုံများ”
စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၅ တွင် အာရှတရားမျှတမှုနှင့် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအဖွဲ့ (AJAR) မှ“ဖွင့်နေသောသေတ္တာ- မြန်မာပြည်ရှိ စစ်ပွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်ခွင့်တို့ကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့သော အမျိုးသမီးများ၏ အတွေ့ အကြုံများ” အစီရင်ခံစာအား ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ) (KWAT)၊ ကရင်အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ (KWEG) နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ယက် (မြန်မာ) (WON) နှင့် ပူးတွဲ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရန်ကုန်မှ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ ကရင်နှင့် ကချင် ပြည်နယ်ရှိ ပဋ္ဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရာ ဒေသတို့မှ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သော အမျိုးသမီး (၂၉) ဦးတို့၏ အကြောင်းအရာ တို့ကို စုစည်းတင်ပြ ထား သည်။ ဤစာစောင်သည် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးအင်ဒိုနီးရှား၊ တီမောလက်စ်တီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့မှ အမျိုးသမီး (၁၄၀) ဦးတို့အား AJAR မှ သုတေသန ပြုထားခြင်းကိုဖော်ပြ ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ်ပြီး AJAR ၏ အဓိကရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တို့ကိုတင်ပြထားခြင်း၊ AJAR ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနည်းလမ်းအထူးပြု သုတေသနချည်းကပ် နည်း တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့် အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ် သူအမျိုးသမီး တို့အား လျော်ကြေးများပေးခြင်း စသည်တို့ကိုဖြေရှင်းပေးသော အကြံပြု ချက် တို့ကို ဤစာစောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အကြမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆယ်စုနှစ်များစွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လိုအပ် သည့် အရင်း အမြစ်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုး သမီးတို့သည် နည်းပေါင်းစုံဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရသည့်အတွက် AJAR ၏ သုတေသနသည် ဆက်စပ်မှုရှိနေသေးသည်ကို ထောက် ပြသည်။ အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ကို ပိုမိုအားကောင်းစေခြင်းနှင့် ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့် ယဉ်ကျေးမှု ကို သုတေသန၏ အဓိက တွေ့ရှိချက်အဖြစ် ထောက်ပြထားသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းသုတေသနပြုမှုတွင် အမျိုးသမီး ၂၉ ဦး၏ အလွန် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးကြေကွဲစရာကောင်းသော ဇာတ်ကြောင်းတို့ကို ဖော်ပြထားသော်လည်း အစိုးရ၊ စစ်တပ်၊ အခြားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများမှ အကြမ်း ဖက်မှု ဘေးအန္တရယ်တို့မှကင်းလွတ်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှု ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် အခြေအနေတို့ကို အတူတကွ ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ သည်။ ယင်းအမျိုးသမီးတို့၏ ဇာတ်လမ်းတို့မှ ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် ၎င်းတို့တွင်ရှိသော စွမ်းရည်နှင့် ခိုင်မြဲသည့်စိတ်ဓာတ်တို့ ကို အသုံးပြုပြီး အသက်ရှင်သန် ရပ်တည် နိုင်ရန်အတွက် တင်းမာ ရက်စက်သော အခြေအနေတွင် အနိုင်မခံအရှုံးမပေးပဲ ကြိုးစားလုပ် ဆောင်နေ သည်ကို မြင် တွေ့ရသည်။
AJAR ၏ ဒါရိုက်တာ၊ Galuh Wandita မှ “ အကြမ်းဖက်ခံရသူအမျိုးသမီးများကနေပြီး လူမှု-စီးပွားဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ၏ ဆိုးကျိုးတွေ နှင့် ရုန်းကန်နေရပြီး၊ အခြေခံ ၀န်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းမရနိုင်ကြဘူး။ ဒါတွေက သူတို့၏ တရားမျှတမှု ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက် လုပ်နိုင်စွမ်းအားတွေကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်။ ”
အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုမှ ကင်းလွတ်လာသူ ကချင်၊ ကရင် စသည့် ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်ပွားသောနယ်မြေမှ အမျိူးသမီးများနှင့် အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၉ ဦးတို့အား အသေးစိပ် ထဲထဲဝင်ဝင် ဆွေးနွေး ချက်အရ မိမိတို့မှ မြန်မာအစိုးရ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် လူမှုအသိုင်း အ၀ိုင်းတို့ အား အောက်ပါအကြံပြုချက်များကို ဖည့်ဆည်းပေးရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့်ကာလအတွင်း အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးဖိနှပ်မှု များ၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုတို့အဆုံးသပ်စေရေးချက်ခြင်း အကောင်အထည် ဖော်ရန်။
စစ်တပ်ကို အရပ်သားအစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိရန်အတွက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်။
မြန်မာအစိုးရသည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်တို့ကို အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးရန်နှင့် ယင်းစာချုပ်တို့အား ပြည်တွင်း ဥပဒေများပြဌာန်းရာတွင် ထည့်သွင်းမှုရှိစေရေး အတွက် သေချာမှုရှိစေရန်နှင့် စီဒေါ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၃၂၅ နှင့် ၁၈၂၀၊ ပဋ္ဋိပက္ခအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု အဆုံးသပ်ရေး ပဋ္ဋိဥာဉ် ကြေညာချက်နှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေအရ အမျိုး သမီးများအား တာဝန် ၀တ္တရားရှိသည့်အတိုင်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတို့တွင် အမျိုးသမီးများမှ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝစွာပါဝင် နိုင်ရန် သေချာမှု ရှိစေရန်နှင့် ယင်းဆွေးနွေးပွဲတို့တွင် အတိတ်ကာလ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက် မှုတို့ကို ထည့်သွင်းရန်။
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်း ဖက်မှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် ထိရောက်သော ဥပဒေဘောင်နှင့် ဥပဒေဘောင်ပြင်ပ အသွင်ကူး ပြောင်းရေးကာလ တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေး ယန္ထရားတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် သေချာမှုရှိစေရန်နှင့် အကြမ်းဖက်ခံရသူ အမျိုးသမီးများမှ တရားမျှတမှုကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အကျိူးခံစားခွင့် ရရှိစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်အကောင် အထည်ဖော်ရန်။
ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့်အတူ ပဋ္ဋိပက္ခကြောင့် အိုးအိမ်မဲ့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရသော ဒုက္ခသည်များ၊ ပြည်တွင်း စစ်ပြေးရှောင်များ နေရပ်သို့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ၎င်းတို့ဆန္ဒအလျောက် နေရပ်သို့ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပြန်နိုင်ရန်အတွက် အခြေအနေသတ်မှတ်ချက်များ ဖန်တီးပေး ရန်။
အကြမ်းဖက်မှုမှ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူ အမျိုးသမီးများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင် ရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ အထူးသဖြင့် ကျန်းမားရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ စိတ်ဒဏ်ရာ ကုစားပေးခြင်း။ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အိုမင်းလာသူများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော အလုပ်များဖန်တီးပေးခြင်း ဖြင့် ၀င်ငွေများရရှိခြင်း၊ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းများနှင့် အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်းများ စသည့် ၀န်ဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍပေါင်းစုံ တို့ကို စီစဉ်ချမှတ်ပေးရန်။
အကြမ်းဖက်မှုမှ ကင်းလွတ်လာသူအမျိုးသမီးများအတွက် ကွန်ယက်များနှင့် ၎င်းတို့ကြား ချိတ်ဆက်မှုများ အတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးရန်။ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုရှိရေးနှင့် အခြား သင့်လျော်သော ဖိုရမ်တို့တွင် ယင်းအမျိုးသမီးများပါဝင်နိုင်ရန် ထည့်သွင်းပေးရန်။
အစီရင်ခံစာမြန်မာဘာသာကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
Tags: Anti-Violence Against Women Law, Asia Justice And Rights, Human Rights, Human Rights Violations, Kachin Women's Association – Thailand, Karen Women Empowerment Group (KWEG), the Declaration of Commitment to End Sexual Violence in Conflict, Women, Women's Organizaions Network of Myanmar